Fanolorana Loka Nobel Momba ny Fandriampahalemana, Hafatra Mavesatra Ho An’ny Fitantanana Ao Amerika · Global Voices teny Malagasy
Fanolorana Loka Nobel Momba ny Fandriampahalemana, Hafatra Mavesatra Ho An'ny Fitantanana Ao Amerika
Voadika ny 07 Oktobra 2018 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Português, bahasa Indonesia, polski, English, Svenska, Français
Nadia Murad sy Denis Mukwege, Loka Nobel Momba ny Fandriampahalemana 2018. Fanakambanana sary nampiasàna ny lisansa creative commons CC-BY-NC
Natolotra ho an'ilay Yazidie irakiàna Nadia Murad sy ilay Kongoley Denis Mukwege ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, noho ny “ezak'izy ireo ho fampitsaharana ny herisetra ara-nofo ho toy ny fitaovampiadiana an'ady“. Azo ambara ho toy ny ampahanà zava-tsy nampoizina ihany ity raharaha ity (ny filoha koreàna tatsimo Moon Jae-in sy Angela Merkel no tsara toerana tao) nefa Nadia Murad sy Denis Mukwege no azo antoka fa mendrika indrindra hahazo izany tamin'ireo mpifaninana tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa.
Nadia Murad dia vehivavy Irakiàna 23 taona, nalain'ny Fanjakana Islamika (EI) an-kery tao Kocho tanànany, ao akaikin'i Sinjar any avaratr'i Iràka, tamin'ny Aogositra 2014. Nandritry ny nitazonana azy, nampijaliana i Nadia, imbetsaka niharan'ny fanolanana faobe, namidy ho toy ny andevo fanaovana filàna ara-nofo ary nampivadiana an-tery tamin'ny iray tamin'ireo naka azy an-kery. Imbetsaka nanandrana nandositra izy ary nahavita nankao Alemaina. Hatreo i Nadia dia nitolona ho an'ny vondrompiarahamonina yazidie izay mizaka fandripahana ataon'ny Fanjakana Islamika.
Denis Mukwege dia lehilahy mpampiteraka any amin'ny faritr'i Kivu, Repoblika Demaokratikan'i Kongo. Efa 15 taona mahery no niasàny ho an'ireo reny sy zaza niharan'ny herisetra ara-nofo nataon'ireo mpikambana avy amin'ireo vondrona samihafa mitam-piadiana mamafy horohoro ao amin'ilay faritany. Araka ny ampahatsiahivin'i Dr. Mukwege, raha kely indrindra dia 500 000 ireo vehivavy kongoley voaolana tao anatin'ny 16 taona. Manelingelina ny tetik'ireo vondrona mitam-piadiana manimba ny vehivavy ao amin'ilay faritra ny asan'i Dr Denis Mukwege. Ny 25 Oktobra 2012, niharan'ny herisetra izy tao an-tokatranony tao Bukavu, izay nahafaty ny mpiandry tananany. Mukwege, tsy fantatra fotsiny amin'ny fijoroany sy ny fanakianany tsy mitsahatra an'ireo vondrona mitam-piadiana mamafy horohoro ao amin'ny faritra, fa koa noho ny fitsaboany maimaimpoana ireo tra-pahavoazana.
Ity fanolorana ity dia fanamafisana mafy tokoa fa ny zon'olombelona no tokony ho asa atao lohalaharana ho an'ireo mpitarika manerana izao tontolo izao. Ny fandaharana ny fotoanan'ity fanolorana loka ity dia mifangarika be amin'ny fikororosin'ny zon'olombelona ao Etazonia : io firenena io izay ahitàna ankizy hidiana anaty trano garaba, izay tsy mitsahatra ny fizakàn'ny vitsy an'isa ny herisetran'ny polisy, izay anaovana tsinontsinona ny zon'ny asa fanaovana gazety ary toerana izay iampangan'ny vehivavy telo ny ho filoha vaovaon'ny Fitsaràna Antampony, Brett Kavanaugh ho nanolana azy ireo.
Na ny filoha Donald Trump izy tenany aza dia misy vehivavy ampolony miampanga azy ho nanao fanararaotana ara-nofo, ary voarakitry ny Washington Post anaty lahatsary mirehareha « misafo ny faritra saropadin'ny vehivavy ».
Raha mbola nisy nampisalasala ny fihenan'ny herisetra malefaka ataon'i Etazonia amin'ny ambiny sisa eto amin'izao tontolo izao hifanaraka amin'ny zavamisy, ny fanolorana ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ho an'i Nadia Murad sy Denis Mukwege dia tena fanomezana henatra tanteraka ny fitantanana amerikàna izay toy ny miezaka fatratra manao izay rehetra azony atao mba hiavahana amin'izao tontolo izao, araka ny tiana ampahatsiahivina amin'ilay tenifaneva hoe ‘i Amerika Aloha’. Nifidy an'i Nadia sy Denis ny ambiny taminì'izao tontolo izao, nifidy an'i Donald sy Brett kosa i Etazonia. Tian'i Trump atao “ny hamerina indray ny halehibeazany ho an'i Amerika” (Make America Great Again), saingy ho an'ny ambiny eto amin'izao tontolo izao, toa ny fanomezana indray an'i Amerika ny haratsian-toetrany no mba vitan'i Trump, haratsian-toetrany toy ny fony fotoanan'ny lalàna Jim Crow sy ny Maccarthysme. Avy amin'ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ka hatramin'ireo fifanarahana momba ny toetrandro vita tsy ela akory tao Parisy, toa asehon'ny zavatra rehetra fa te-hiala faran'izay haingana azony atao tsy ho ambany vahohon'ny fitantanana amerikàna ny ambiny eto amin'izao tontolo izao, ary tsy miraharaha ampahibemaso mihitsy aza manao angoan-tenda.